Isi ihe na-agba agba nnukwu nnwale a na-akwọ ụgbọala gị variable eri na-efu. The ụzọ kasị mma isi mee nke a bụ akpaaka na emebe-enye obi ụtọ nwere.
Digital nwere ike inwe nnọọ iche na-eri owuwu na a na-enyere ndị nnyocha na-agba ọsọ nwere na ndị agaghị ekwe omume n'oge gara aga. More kpọmkwem, nwere n'ozuzu nwere isi ihe abụọ na ụdị nke na-akwụ ụgwọ: ofu-akwụ ụgwọ na variable-akwụ ụgwọ. Ofu-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ na-adịghị agbanwe dabere na otú ọtụtụ ndị keere òkè i nwere. Dị ka ihe atụ, na a ụlọ nyocha nnwale, ofu-akwụ ụgwọ nwere ike ịdị na-eri nke ịgbaziri ihe ohere na ịzụ ngwá ụlọ. Agbanwe-akwụ ụgwọ, na aka nke ọzọ, mgbanwe dabere na otú ọtụtụ ndị keere òkè i nwere. Dị ka ihe atụ, na a ụlọ nyocha nnwale, variable-akwụ ụgwọ nwere ike-abịa site na-akwụ ụgwọ ọrụ na sonyere. Ke ofụri ofụri, analọg nwere nwere ala ofu-akwụ ụgwọ na elu variable-akwụ ụgwọ, na dijitalụ nwere nwere elu ofu-akwụ ụgwọ na ala variable akwụ ụgwọ (ọgụgụ 4.18). Na nke kwesịrị ekwesị imewe, i nwere ike ụgbọala variable eri nke gị nnwale niile ụzọ efu, na nke a nwere ike ịmepụta na-akpali akpali nnyocha ohere.
Ọgụgụ 4,18: schematic nke na-eri owuwu na analọg na dijitalụ nwere. Ke ofụri ofụri, analọg nwere nwere ala ofu-akwụ ụgwọ na elu variable akwụ ụgwọ ma digital nwere nwere elu ofu-akwụ ụgwọ na ala variable-akwụ ụgwọ. The dị iche iche na-eri owuwu pụtara na dijitalụ nwere ike na-agba ọsọ na a ọnụ ọgụgụ na ọ gaghị ekwe omume na analọg nwere.
E nwere isi ihe abụọ, ndị nke variable-eri-ịkwụ ụgwọ inweta ndị ọrụ na ịkwụ ụgwọ ka sonyere-na onye ọ bụla n'ime ndị a nwere ike chụpụrụ efu iji dị iche iche na azum. Ịkwụ ụgwọ inweta ndị ọrụ azuokokoosisi si ọrụ na nnyocha na-enyere aka na-ew sonyere, na-anapụta agwọ ọrịa, ma atụ a ga esi. Dị ka ihe atụ, ndị analọg ubi nnwale nke Schultz na ibe (2007) na-elekọta mmadụ norms na ọkụ eletrik ojiji chọrọ nnyocha na-enyere aka iji gaa n'ụlọ nke ọ bụla napụta ọgwụgwọ na-agụ electric mita (ọgụgụ 4.3). All mgbalị a site nnyocha na-enyere aka pụtara na-agbakwunye a ọhụrụ ezinụlọ na ọmụmụ gaara kwukwara na-eri. N'aka nke ọzọ, maka dijitalụ ubi nnwale nke Restivo na van de Rijt (2012) on ụgwọ ọrụ na Wikipedia, na-eme nnyocha nwere ike tinye ihe ndị keere òkè na ọ fọrọ nke nta ọ na-eri. A n'ozuzu atụmatụ maka mbenata variable administrative akwụ ụgwọ bụ dochie mmadụ ọrụ (nke bụ oké ọnụ) na kọmputa ọrụ (nke bụ ọnụ ala). Olee ihe enyemaka, i nwere ike jụọ onwe gị: nwere ike ihe a na-agba ọsọ mgbe ọ bụla m ìgwè ndị nnyocha na-ehi ụra? Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, ị na mere a oké ọrụ nke akpaaka.
Nke abụọ isi ụdị variable-eri bụ ịkwụ ụgwọ sonyere. Ndị nnyocha ụfọdụ ji na Amazon Mechanical Turk na ndị ọzọ na online ọrụ na ahịa ka ibelata ego na-mkpa maka sonyere. Ụgbọala variable akwụ ụgwọ n'ụzọ nile zero, Otú ọ dị, a dị iche iche obibia dị mkpa. Ruo ogologo oge, na-eme nnyocha e mere nwere na-otú agwụ ike na ha ga-akwụ ndị mmadụ na-ekere òkè. Ma, ọ bụrụkwanụ na i nwere ike ịmepụta otu nnwale na ndị mmadụ chọrọ ka ọ na-? Nke a nwere ike ụda dị anya N'ubochi, ma m ga-enye gị otu ihe atụ n'okpuru na nke m ọrụ, na e nwere ndị ọzọ atụ na Isiokwu 4.4. Rịba ama na isi otú ahụ na-emebe na-atọ ụtọ nwere ihe gosiri na ụfọdụ n'ime isiokwu n'Isi nke 3 banyere emebe-atọ ụtọ karị nnyocha ndị e mere na n'Isi nke 5 banyere imewe nke uka mmekota. N'ihi ya, m na-eche na soò ụtọ-ihe nwekwara ike a ga-akpọ onye ọrụ ahụmahụ-ga-esiwanye mkpa akụkụ nke nnyocha imewe na dijitalụ afọ.
Isiokwu 4.4: Ihe Nlereanya nke nwere na efu variable na-eri na ụgwọ atụrụ sonyere na a bara uru ọrụ ma ọ bụ na-atọ ụtọ ahụmahụ.
Weebụsaịtị na ahụ ike ọmụma Centola (2010)
mmega omume Centola (2011)
Movie-atụ aro Harper and Konstan (2015)
Ọ bụrụ na ị chọrọ ike zero variable akwụ ụgwọ nwere ị ga-chọrọ iji hụ na ihe niile a n'ụzọ zuru ezu akpaaka na na sonyere na-adịghị achọ ka ọ bụla ịkwụ ụgwọ. Iji gosi otú nke a bụ na o kwere omume, Aga m na-akọwa m dissertation nnyocha ọ na-aga nke ọma na ọdịda nke omenala na ngwaahịa. Ihe atụ a na-egosikwa na efu variable eri data bụghị naanị banyere ime ihe ndị dị ọnụ ala karịa. Kama, ọ bụ banyere kwe nwere na-agaghị ekwe omume na uzọ ọzọ.
My dissertation e akpali ndị dị mgbagwoju anya ọdịdị nke ihe ịga nke ọma n'ihi na omenala na ngwaahịa. Hit songs, kasị mma na-ere akwụkwọ, na blockbuster fim bụ ọtụtụ ihe, ọtụtụ ihe ịga nke ọma karịa nkezi. N'ihi nke a, ndị ahịa maka ngwaahịa ndị a na-akpọkarị "-eto eto-na--niile" na ahịa. Ma, n'otu oge ahụ, nke akpan akpan song, akwụkwọ, ma ọ bụ ihe nkiri a ga-ọma bụ incredibly ejighị n'aka ruo n'ókè. The screenwriter William Goldman (1989) elegantly chịkọtara nza nke agụmakwụkwọ nnyocha site n'ikwu na, mgbe ọ na-abịa ịkọ ihe ịga nke ọma, "Ọ dịghị onye maara ihe ọ bụla." The unpredictability nke eto eto-na--ahia niile mere ka m na-eche otú ọtụtụ ihe ịga nke ọma bụ n'ihi nke àgwà na ole bụ nnọọ chioma. Ma ọ bụ, kwuru ubé dị iche iche, ọ bụrụ na anyị nwere ike mepụta ihe yiri na òtù na-enwe ha niile evolve onwe ya, ga-ahụ songs ghọọ ewu ewu na onye ọ bụla n'ụwa? Na, ọ bụrụ na ọ bụghị, ka ọ ga-usoro na-akpata ndịrịta iche ndị a?
Iji zaa ajụjụ ndị a, anyị na-Peter Dodds, Duncan Watts (m dissertation-enye Ndụmọdụ), na I-ọsọ a usoro nke online ubi nwere. Karịsịa, anyị na-wuru a website akpọ MusicLab ebe ndị mmadụ nwere ike ịchọpụta ọhụrụ music, na anyị na-eji ya maka usoro nke nwere. Anyị recruited sonyere site na-agba ọsọ ọkọlọtọ mgbasa ozi na a n'afọ iri na ụma-mmasị website (ọgụgụ 4.19) na site asiak ke media. Sonyere rutere anyị website nyere ụbụrụ bụ, dechara a obere ndabere ajụjụ, ma bụrụ ndị e enweghị usoro kenyere otu n'ime abụọ ibuo ọnọdụ-nọọrọ onwe ha na-elekọta mmadụ mmetụta. Na onwe ọnọdụ, ndị mere mkpebi banyere nke songs na-ege ntị, nyere naanị aha ndị ìgwè ndị agha na songs. Mgbe na-ege ntị a song, sonyere a gwara dịruru ọ mesịa, ha nwere ohere (ma ọ bụghị ọrụ) ibudata song. Na-elekọta mmadụ mmetụta ọnọdụ, ndị nwere otu ahụmahụ, ma e wezụga na ha nwere ike na-ahụ otú ọtụtụ ugboro ọ bụla song e ebudatara site gara aga sonyere. Ọzọkwa, ndị na-elekọta mmadụ mmetụta ọnọdụ e enweghị usoro kenyere otu n'ime asatọ yiri na òtù ọ bụla nke ghọrọ usoro n'adabereghị (ọgụgụ 4.20). Na iji imewe, anyị efehe abụọ yiri nwere. Ke akpa, anyị n'ihu sonyere na songs na unsorted okporo, nke nyere ha a na-adịghị ike mgbaàmà nke ewu ewu. Na nke abụọ nnwale ahụ, anyị ji songs na a họọrọ ndepụta, nke nyere a nnọọ ike mgbaàmà nke ewu ewu (ọgụgụ 4.21).
Ọgụgụ 4,19: Otu ihe atụ nke ọkọlọtọ ad na ndị ọrụ ibe m na m na-n'oru sonyere maka MusicLab nwere (Salganik, Dodds, and Watts 2006) .
Ọgụgụ 4,20: Na na imewe maka MusicLab nwere (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Sonyere na-enweghị usoro kenyere ọrụ n'ime otu nke abụọ ọnọdụ: nọọrọ onwe ha na-elekọta mmadụ mmetụta. Sonyere na ndị ụlọrụ nọọrọ onwe ọnọdụ mere ka ha nhọrọ enweghị ihe ọ bụla ihe ọmụma banyere ihe ndị ọzọ mere. Ndị na-elekọta mmadụ mmetụta ọnọdụ e enweghị usoro kenyere n'ime otu nke asatọ yiri ụwa, ebe ha nwere ike ịhụ ndị ewu ewu na-dị ka tùa site downloads nke gara aga sonyere-nke ọ bụla song na ha n'ụwa, ma ha apụghị ịhụ ihe ọ bụla ọmụma, enyeghịkwa ha ọbụna mara banyere ịdị adị nke, ọ bụla maka ụwa ndị ọzọ.
Anyị chọpụtara na ewu ewu na nke songs dị iche gafee ụwa aro ọrụ dị mkpa nke chioma. Dị ka ihe atụ, n'otu ụwa na song "Lockdown" site 52Metro wee na 1st, na ọzọ n'ụwa O wee na 40 nke 48 songs. Nke a bụ kpọmkwem otu song asọ mpi megide ihe niile ahụ songs, ma na otu ụwa ya nwetara kechioma na ndị ọzọ ọ daghị. Ọzọkwa, site atụnyere nsonaazụ gafee abụọ nwere, anyị hụrụ na-elekọta mmadụ mmetụta na-eduga ná ọzọ ahaghị ịga nke ọma, nke ikekwe na-emepụta ọdịdị predictability. Ma, na-achọ gafee ụwa (nke na-apụghị mere na mpụga nke ụdị ihe yiri ụwa nnwale), anyị chọpụtara na-elekọta mmadụ mmetụta n'ezie mụbara unpredictability. Ọzọkwa, ihe ijuanya, ọ bụ songs of kasị elu mkpesa na Onye kacha ejighị n'aka ruo n'ókè ga esi (ọgụgụ 4.22).
Ọgụgụ 4,21: Screenshots si elekọta mmadụ mmetụta ọnọdụ ndị dị MusicLab nwere (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Na-elekọta mmadụ mmetụta ọnọdụ na nnwale 1, ndị songs, tinyere ọnụ ọgụgụ nke aga downloads, E gosiri ndị sonyere mere ndokwa na a 16 X 3 akụkụ anọ okporo, ebe ọnọdụ nke songs e enweghị usoro kenyere ọrụ maka nke ọ bụla soò. Na nnwale 2, ndị na-elekọta mmadụ mmetụta ọnọdụ e gosiri na songs, na download adabere, adade ke otu kọlụm na-agbadata iji nke ugbu a ewu ewu.
Ọgụgụ 4,22: Results si MusicLab nwere na-egosi na mmekọrịta dị n'etiti mkpesa na ihe ịga nke ọma (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . The x-axis bụ ahịa òkè nke song na ndị ụlọrụ nọọrọ onwe ụwa, nke na-eje ozi dị ka a ọtụtụ nke na mkpesa nke song, na y-axis bụ ahịa òkè nke otu song na 8 elekọta mmadụ mmetụta na òtù, na-eje ozi dị ka a ọtụtụ nke ịga nke ọma nke songs. Anyị chọpụtara na-amụba na-elekọta mmadụ mmetụta na sonyere nwetara-kpọmkwem, mgbanwe okirikiri nhọrọ ukwuu site nnwale 1 na-enwe ịchọpụta 2 (ọgụgụ 4.21) -caused ịga nke ọma emekwu ihe ejighị n'aka ruo n'ókè, karịsịa maka ndị kasị elu mkpesa songs.
MusicLab nwee ike na-agba ọsọ na nnoo efu variable na-eri n'ihi otú ahụ e mere. Akpa, ihe niile e sere akpaghị aka ya mere na ọ bụ ike na-agba ọsọ mgbe m nọ na-ehi ụra. Nke abụọ, ụgwọ bụ free music otú e nweghị variable soò akwụ ụgwọ na-eri. The ojiji nke music dị ka ụgwọ na-egosi otú e mgbe ụfọdụ a ahia-apụ n'etiti ofu-akwụ ụgwọ na variable-akwụ ụgwọ. Iji music ụba na ofu-akwụ ụgwọ n'ihi na m nwere na-eji oge ichebe ikike n'aka ndị na ìgwè ndị agha na-akwadebe akụkọ maka ìgwè banyere sonyere 'mmeghachi omume ha music. Ma, na nke a, na-amatawanyezi ofu-akwụ ụgwọ iji ibelata variables akwụ ụgwọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ime; nke ahụ bụ ihe nyeere anyị na-agba ọsọ nnwale na bụ banyere 100 karịa a ọkọlọtọ lab nnwale.
Ọzọkwa, MusicLab nwere na-egosi na efu variable-eri adịghị ga-enwe njedebe n'onwe ya; kama, ọ pụrụ ịbụ a iji na-agba ọsọ a ọhụrụ ụdị nchọpụta ahụ. Rịba ama na anyị adịghị eji ihe niile anyị na sonyere na-agba ọsọ a ọkọlọtọ-elekọta mmadụ mmetụta lab nnwale 100 ugboro. Kama, anyị mere ihe dị iche iche, nke unu nwere ike na-eche nke dị ka ịmafe si a psychological nnwale na-a sociological nnwale (Hedström 2006) . Kama ilekwasị anya n'otu n'otu mkpebi, anyị lekwasịrị anya anyị nnwale on ewu ewu, a mkpokọta pụta. Nke a mgba ọkụ ka a mkpokọta pụta pụtara na anyị chọrọ banyere 700 sonyere imepụta otu data mgbe (e nwere mmadụ 700 na onye ọ bụla nke yiri ụwa). Na ọnụ ọgụgụ bụ nanị kwe omume n'ihi ndị na-eri Ọdịdị nke ahụ nnwale. Ke ofụri ofụri, ma ọ bụrụ na-eme nnyocha chọrọ ịmụ otú mkpokọta a ga esi ibili si n'otu n'otu mkpebi, otu nwere dị ka MusicLab bụ akpali nnọọ akpali. N'oge gara aga, ha anọwo na logistically ike, ma, ndị isi ike na-anyụ ka ọkụ n'ihi na o na-efu variable eri data.
Na mgbakwunye na-egosi uru nke efu variable eri data, ndị MusicLab nwere na-egosikwa ihe ịma aka na nke a obibia: elu ofu-akwụ ụgwọ. M ikpe, M bụ nnọọ kechioma na-enwe ike-arụ ọrụ na a nkà web Onye Mmepụta aha ya bụ Peter Hausel maka ọnwa isii iji rụọ nchọpụta ahụ. Nke a bụ nanị kwe omume n'ihi na m enye Ndụmọdụ, Duncan Watts, natara a ọnụ ọgụgụ nke onyinye ego iji na-akwado ụdị nnyocha. Technology mma ebe ọ bụ na anyị wuru MusicLab na 2004, na ọ ga-abụ nnọọ mfe ka o wuo nnwale dị ka nke a ugbu a. Ma, elu ofu-eri azum bụ n'ezie nanị kwe omume maka nnyocha ndị nwere ike n'ụzọ ụfọdụ ekpuchi ndị na-akwụ ụgwọ.
Ná mmechi, digital nwere ike inwe nnọọ iche na-eri owuwu karịa analọg nwere. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba ọsọ n'ezie nnukwu nwere, ị kwesịrị ị na-agbalị ịdịrị gị variable eri ka o kwere mee na-kwesịrị n'ụzọ nile 0. Ị nwere ike ime nke a site automating ndị ọrụ ụgbọ ala gị nnwale (eg, dochie mmadụ oge na kọmputa oge) na emebe nwere na ndị mmadụ chọrọ ka ọ na-. Researchers ndị nwere ike chepụta nwere na atụmatụ ndị a ga-enwe ike na-agba ọsọ ọhụrụ iche iche nke nwere na-adịghị ekwe omume n'oge gara aga.